Free Download Manga Studio hore u Mac | MacArsenal
> Resource > Mac > Manga Studio hore u Mac
Manga Studio hore waa codsi feature-hodan iyo sawirrada kulul kaas oo loogu talagalay in la abuuro Manga iyo maadda ah. Its qalab midabaynta iyo sawir weyn helitaanka fudud in ay soo saaraan masterpiece cajiib ah leh tayo sare leh ku siinayaa. Waxa kale oo aad edit karaa shaqadaada iyada oo muuqaalada dhisay-in. Manga Studio hore gargaaree fiican oo ma aha oo kaliya Manga hoose laakiin xirfad iyo rinjiile maadda ah.
Taageer qaabab badan
Manga Studio hore ayaa waafaqsan weyn oo aad ku helayso wax badan oo ku habboon. (Kaliya Mac) Waxaad u isticmaali kartaa in ay soo saaraan badan oo xul ah qaabab image, oo ay ku jiraan pdf, jpeg, tga, tiff, psd, bmp, PNG, EPS (monochrome oo keliya), iyo pict.
Function tafatirka Xoog
Manga Studio hore aad bixisaa noocyo kala duwan oo sida diirada sare oo lagu dabaqi karo si ay u xumeeyaan. Saamaynta gaar ah oo fantastik ah ku qurxin doonaa artwork.You sidoo kale resize karaa image oo aan khasaaro tayada. The taliyayaashii gundhig iyo qalab kale oo loo fududeeyo doonaa habka design aad. Waxa kale oo aad ku wareejin kartaa sawiro 2D in ay laxankeeda iyo xog waafaqsan 2DLT muujinta ku daaqaan.
Kiniin ah qalinka iyo qaababka kale ee Manga Studio hore idin siin doonaa waayo-aragnimo sawir aan la aamini karin. Waqtigaas, waxaa laga yaabaa in aad dareento in aad tahay fanaan Manga xirfadeed.
Manga Studio hore waa barnaamij abuurka Manga ugu xirfada iyo amzing horseedka u ah aduunka. Version ugu dambeeyey waxay bixisaa taageero buuxda u Intuos4 iyo hagaajin badan oo cayayaanka. Waxa kale oo ay ku darayaa doorasho page wareejin counterclockwise in bar qalabka. Waxaan aaminsanahay in ay noqon doonaa caawiye ugu fiican in aad.